The ugu fiican Chine iPhone iyo iPad ah 2015 - Rule News
The ugu fiican Chine iPhone iyo iPad ah 2015
From Periscope iyo Enlight in Apple Music, Google Photos, YouTube ay ciyaareyso ay wadnaha iyo: ugu wanaagsan ee macruufka apps cusub ee sannadka
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “The ugu fiican Chine iPhone iyo iPad ah 2015 - Apple oo ku soo bandhigaya tartanka Spotify” waxaa qoray Stuart ku milmaya, waayo theguardian.com on Friday 25 December 2015 13.00 UTC
Sida laga soo xigtay shirkadda oo ah falanqeeye Forrester Research, Milkiilayaasha smartphone qaataan 85% waqtiga ay kuwa qalabka la isticmaalayo apps, laakiin 84% waqti la qaatay iyadoo la isticmaalayo kaliya shan apps in horay ma preloaded on qalabka ay.
Taasi waa sababta ay si adag apps cusub si uu u noqdo WhatsApp ama Candy burburi hits yimaa-: xataa haddii horumarinta ay ka dhaadhicin kara dadka si ay u soo dejisan, helitaanka inuu iyaga si joogto ah u isticmaalaan waa caqabad kale oo gebi ahaanba.
Sidaas oo ay tahayna, badan ayaa isku dayaysa, iyo 2015 arkay qaar ka mid ah fikradaha inventive bilowdo on Store App ah. Halkan Gogoldhiga of our 25 macruufka ugu fiican Chine brand-cusub ka bilaabo sannadda. Haddii Android waa madal doorashada, waxaa jira liiska sannad-dhamaadka u gaar ah in halkan. Dhanka kale, haddii aad raadineyso weeyna macruufka ah kulan ugu fiican ee 2015, akhri Gogoldhiga this.
Maxaa inoo kastoo seegay? qaybta comments wuxuu u furan yahay talooyin aad u apps macruufka jiray oo cusub (ama xataa kaliya cusub si aad u) in 2015.
lacagta ugu weyn Qaar ka mid ah barnaamijyadooda 'waa in ay kaa caawiyaan in aad waqti badan ku qaataan aan eegaya shaashad, iyo Star Walk 2 waa mid ka mid ah. Sugidda daashay hiwaayadda, waxay kaa caawinaysaa in aad aqoonsado xiddigaha, Burjiyo, meerayaasha iyo ururta, in cirka sare, nadaam 3D ah Nebulae caan ah iyo hab-wakhtiga habeenkii ah si ay u dhinto screen-light in ugu yaraan.
adag hadlaya, Grayout waa ciyaar, laakiin waxaan u fayl ka yar "khayaali interactive". Si kastaba ha ahaatee waa inaad kala, Oo waa ku yaab this: prequel a ciyaarta faafreebka Fikirka-xanaajin sameeysa isla ee Blackbar. Calan isbitaalka, waa arkaa waxaad wada xaajood "aphasia post-traumatic" si aad u ogaato habka loo marayo sheekada.
Mindfulness ahaa in badan wararka sanadkan, la Moodnotes mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu rajeyneysa inay balaariso. Waa a wargeys niyadda digital in aad u helo si ay ula socdaan sida aad dareemayso, halka qaar ka mid ah soo jeediyay talooyin iskaga "dabin u malaynaya" in aad si indho la'aan karo madowga ah. Its design hubiyaa habka marna ahaa herdamaysay.
22. Layout ka Instagram
Waa su'aal suurad wanaagsan oo in la yaabanahay sababta ay tani waa app gaar ah oo aan si fudud u feature a gudahood Instagram, laakiin in aysan joojin Layout isagoo aalad photo-collage Begovic oo la heli karo. Dooro darbo aad, iyaga diyaarin in a jir multi-image, ka dibna wadaagaan ama iyaga ku badbaadin - si degdeg ah ugu dambaysta, waayo, la wadaago on shabakadaha bulshada aan Facebook.
Yaa bixin lahaa si uu u daawado videos YouTubers ', siiyo in ay tahay oo dhan laga heli karaa for free on YouTube? Markabka ahaa isku day si fiican loo qorsheeyay si aad u ogaato, bixiya content cusub ka duwan oo ka mid ah xiddigaha video online ka hor waxaa ka dhacay YouTube. Its dar of music, vlogging iyo majaajilada dhan £ 2.29 bil lahaa badan oo racfaan.
20. dacwadood MyHeart
hamiga Apple ayaa la initiative HealthKit ay yihiin qaar ka mid ah waxyaalaha ugu xiisaha badan ee ku saabsan macruufka hadda, ay ka mid yihiin iskaashiga ay la leedahay cilmi-caafimaad. Jaamacadda Stanford ee MyHeart tirsan app - taas oo ka Maraykanka gudbeen in UK ee 2015 - Waxay ahayd tusaale wanaagsan: gelinaya xogta wadnaha aad u isticmaalka wanaagsan.
iPad-kaliya Electricomics ahaa isku daygii ugu danbeeyay in dib looga fikiro waxyaabaha lagu qoslo oo tixaha graphic qalabka touchscreen. Buuxi la qoslo ka Alan Moore, Garth Ennis, Lee'ah Moore iyo John Reppion, iyo Peter Hogan, waxay muujiyeen sida ay taxaddar (halkii show-offy) isticmaalka interactivity runtii ku dari kari waayeen inay dhexdhexaad ah.
18. Arcadia by Iain isteroberi
khayaali More falgal la sheeko qoraal ah by author Iain isteroberi si gaar ah loogu talagalay dhexdhexaad this. Its storyline branching ogan 10 Warkii intersecting characters ', iyo halka ay interface ku dhowaad tubemap-sida uu ahaa mid aad u qatar ah, tayada qoraal ku xaqiijiyay this mar walba dareemayay sida sheeko a, halkii Sheekadaas a digital.
17. Xafiiska Lens
Haddii aad weligaa helay naftaada qaadato sawir ah a qortay-on isiticmaalaa dambe la isticmaalo, Xafiiska Lens waa sidoo qiimihiisu eegno. Sida wanaagsan ee iskaanka in dokumentiyada sida jeestay kaararka ganacsiga iyo rasiidhada galay qoraalada digital for archiving ammaan, waxa uu noqday mid ka mid ah Chine shaqo la xiriirta ugu waxtarka badan tan iyo markii ay la bilaabay in April.
In 2014, Pacemaker ahaa app a DJing Begovic for iPad in taabtay Spotify ay music. In 2015, in kastoo, wax u noqday xitaa ka sii badan oo xiiso leh: app iPhone la gaar Gargaare macmal-sirdoonka (loo yaqaan Mållgan) in loo dhiso doono keegag idiin - dhamaystiran leh awooda in aad iyaga tweak doono.
Waayo, dadka musaafiriinta soo noqnoqda, kuwaas oo inta badan ka heli naftooda ugaarsanaya internet oo aan iska indha tiri doonaan biilka mobile, WifiMapper waa qiimo. Waxay bixisaa map ka mid ah goobaha Wi-Fi (xor iyo bixisay) macluumaadka ku saabsan sida hufan xidhiidhada ay yihiin, iyo goobaha ay tahay at.
Waxaa jira su'aalo badan ku wareegsan waxa Apple News noqday haye si loo news dhigantahay daabacayaasha, laakiin si adag iigu xukumaa sida mid app ah, waxaa bilaabatay xoog. Waxa uu jiidayo in wararka ka tiro balaadhan oo ah ilaha, iyaga bandhigayaa hir, iyo in kaliya dhawr bilood ayaa muujisay awood hufan si ay u habayn ay feed in aad door bidayso.
13. YouTube ay ciyaareyso ay
Marka laga soo taggo music iyo carruurta videos, kulan waxa uu noqday mid ka mid ah YouTube ee saddex tiir weyn ee content. Iyadoo la raacayo, sanadkan u helay ay app standalone u gaar ah, bixinta si degdeg ah u Let ugu dambeeyay ee videos Play helaan, dib u eegista, Uploads sameeysa iyo - aag of sii kordhaya diiradda for YouTube - durdurrada live dhifasho-esque.
Durba hit a on Android, Camera51 ayaa sida cajiib on macruufka sida kale u dhisay-in software camera. Its xooga waa ku aad ay kaa caawinayaan la tukado iyo Halabuurka, haddii aad xigtay ee walxaha, Bbc ama dadka (selfies ka mid ah, qabka this 2015).
MixRadio mar ahaa adeeg music-Streaming Nokia ayaa, ka hor inta aan laga iibin Microsoft, ka dibna mar kale ka iibiyey Line network bulshada Japanese. Under ay Milkiilaha cusub, waxay noqotay in macruufka markii ugu horeysay la app a safeeyey shakhsi-radio. Taabo ee ah fanaaniinta yar in ay huriyaan channel a, ama qoto dheer u qodaan ilaa ay ururinta cajiib ah playlists Kaapelitalo.
Maxaa la yidhaahdo oo ku saabsan Music Apple oo aan horay loo sheegay in dhererka - ma ugu yaraan in aannu dib u eegis qoto-dheer? xafiiltamaan Spotify ma ahaa sida xun sida naqdiya ay adkaayeen sheegtay, midna waxa uu ahaa sida groundbreaking sida abuuray ay soo jeediyay. Laakiin playlists fiican, Idaacadda aad u-listenable live radio iyo engine a talo smart sameeyey bilow filan hufan.
9. Mailkooda by Gmail
Waayo, kuwa naga mid ah ku dhaarta boostada, 2015 dhamaaday la warka niyad jab in DropBox waa qasaceyn in email app. Waayo, dadka isticmaala Gmail, Santuuqa laga yaabaa in jawaabta ku 2016. Isagoo ka baranay interface user boostada ee, waxaa ku darayaa in muuqaalada sida wada labeeyo fariimo la mid ah, oo kala soo baxay xusuusinta ka emails.
8. Calendar Google
Dhibaatadu waxay la apps taariikheed inventive waa in ay inta badan tahay badan tahay in la soo iibsaday iyo xidhay hoos by kalluun weyn: sida Sunrise sameeyey sanadkan. Ugu yaraan aan dhici doona la Calendar Google, laakiin app uu lahaa badan ku talinaynaa sida kale ah in default macruufka kalandarka, la interface a fudud iyo xusuusinta anfacaya.
Haddii aad xiisaynayso in xaqiiqadu sida dalwaddii (VR) waxay noqon kartaa mid ku saabsan in ka badan ciyaaraha, Vrse waa sidoo qiimihiisu booska homescreen on your iPhone a. It provides access to the growing number of short VR films being produced by interactive filmmaker Chris Milk’s Vrse startup – from Syrian refugees to U2 music videos.
Apple thankfully remembered that women have needs beyond discovering music this year, iyo added period-tracking to its Health app. But Eve (formerly called Ruby) is worth a look as an alternative for tracking everything from periods and stress to sex, with a wider community to tap for advice.
A fine daytime complement to Star Walk 2’s night-time stargazing, Detour is an app for on-foot wanderers. It offers a selection of audio tours, starting with San Francisco but now with London, Paris, Berlin and Barcelona among other cities. From Backstage Westminster to Radical Clerkenwell, it could shed new light on London for Londoners, not just tourists.
Live-streaming video often doesn’t make sense … until some live video turns up that does – from breaking news events to celebrities chatting to fans. Acquired by Twitter before its launch in March on iOS then May on Android, Periscope is quietly becoming a very interesting addition to the media: as our piece on how Bild reporter Paul Ronzheimer used it to cover the Syrian refugees story tusay.
← The kulan fiican Android ah 2015 Runtu waxa ay tahay waxaa ku yaacaya baxay: sababta muuqooda faafin ka dhaqso badan abid →